तीन खानसँग फिल्म खेल्न अस्वीकार गर्ने नायिकाहरू « News24 : Premium News Channel
तीन खानसँग फिल्म खेल्न अस्वीकार गर्ने नायिकाहरू
बलिउडमा हरेक वर्ष सुपरहिट चलचित्र दिएका यी अभिनेताहरूसँग काम गर्न प्राय अभिनेत्रीहरू लालयित हुने गर्दछन् । तर बलिउडका यस्ता केही अभिनेत्रीहरू छन् जसले तीन खानसँग काम गर्ने नाई शब्दको उच्चारण गरेका थिए ।
बलिउडमा मात्र नभई हलिउडमा समेत चर्चा बटुल्न सफल भएकी अभिनेत्री हुन् प्रियंका चोपडा । २००८ मा अमिरको सुपर हिट चलचित्र ‘गजनी’बाट प्रियंका चोपडालाई अफर आएको थियो । उनले चलचित्रमा आफ्नो भूमिका बारेमा बुझ्न चाहिन् । तर, निर्माण पक्षले बताउन नचाहे पछि प्रियंकाले यो चलचित्र छाडेकी थिइन् ।
अर्की अभिनेत्री हुन् दीपिका पादुकोण जसले एउटा मात्र नभएर सलमानको ३ वटा फिल्मलाई ठाडै अस्वीकार गरेकी थिइन । ‘किक’, ‘प्रेम रतन धन पायो’ र ‘सुल्तान’ जस्ता बलिउडमा सफल व्यापार गरेका यी चलचित्रमा उनले काम गर्न अस्वीकार गरेकी थिइन् । दीपिकालाई हिरोइनको रोल चित्त नबुझेपछि अस्वीकार गरेकी हुन् । साथै उनले शाहरुखसँग चलचित्रमा काम नगर्ने समेत घोषणा गरेको भारतीय मिडियाले लेखेको छ ।
३. ऐश्वर्य राय बच्चन
‘१९९६ मा आएको आमिर खानको चलचित्र ‘राजा हिन्दुस्तानी’को अफर पहिलो पटक ऐश्वर्य राय बच्चनलाई गरिएको थियो । त्यो समयमा उनी चलचित्र भन्दा पढाइमा ध्यान दिन चाहेका कारण काम गर्न अस्वीकार गरेकी थिइन । ऐश्वर्यले अस्वीकार गरे पछि उक्त चलचित्र करिश्मा कपूरले गरेकी थिइन् ।
४. जुही चावला
शाहरुख खानको फिल्म ‘दिल तो पागल है’मा करिश्मा कपुरको रोल सुरुमा जुही चावलालाई अफर गरिएको थियो । तर उनले जवाफ नफर्काएपछि त्यो रोल करिश्मालाई दिइएको थियो । चलचित्र सुपरहिट भयो साथै करिश्माले यसै चलचित्रमा उत्कृष्ट सह–नायिकाको अवार्ड पाएकी थिइन् ।
आनन्द एल रायको आगामी अनटाइटल्ड चलचित्रमा कंगनालाई पहिलो पटक अफर गरिएको थियो ।चलचित्रमा कंगनाको जोडी शाहरुख खान रहेका थिए । तर उनले त्यो अफर लाई अस्वीकार गरिन्। यो चलचित्र सेन्ट्रिक भएकाले उनले अस्वीकार गरेको बताएकी छन् ।‘कफी विद् करण’ मार्फत उनले यो कुराको खुलसा गरेकी हुन् ।
६. करिना कपुर
शाहरुखको चलचित्र ‘कल हो ना हो’मा करिना कपूरलाई अफर आएको थियो । करिनाले लिड गरून् भनी करण जोहरले चाहेका थिए । यो चलचित्रमा करिनालाई पनि काम गर्न इच्छा नभएको होइन । तर, पारिश्रमिकको कुरा नमिले पछि अस्वीकार गरेकी थिइन् ।
क्रुज ड्रग्स प्रकरण : बलिउड अभिनेता शाहरुखका छोरा आर्यनलाई ठूलो झटका, पाएनन् जमानत
एजेन्सी । बलिउड अभिनेता शाहरुख खानका छोरा आर्यन खानलाई बुधवार मुम्बई क्रुज ड्रग्स काण्डमा ठूलो
काठमाडौं । ऋषिराज आचार्यको निर्देशनमा बनेको चलचित्र ‘चुरिफुरी’ पौष ९ गतेबाट रिलिज हुने भएको छ